Fandefasana & fiverenana - Popular Jewelry
Fandefasana maimaim-poana amin'ny fandefasana entana an-trano (Etazonia)
Ankafizo ny fandefasana mahazatra mahazatra an-trano (USPS Kilasy Voalohany) amin'ny baiko $ 100 na mihoatra.
Fampahalalana momba ny fandefasana ankapobeny
Azafady avelao ny raharaham-barotra 3-5 andro anaovana fanodinana sy fanamarinana. Avelao ny raharaham-barotra 7-10 fanampiny amin'ny fanaterana an-trano.
Tsy tompon'antoka amin'ny fandefasana entana very, nangalatra na simba na simba izahay. Ny fitaterana rehetra dia miantoka ary ny mpividy dia mandray ny andraikiny rehetra mifandraika amin'ny mpitatitra entana.
Noho ny antony ara-piarovana dia tsy afaka mandefa any amin'ilay adiresy omena fotsiny izahay.
Noho ny antony fiarovana dia mety tsy hisintona fonosana iray izahay na hanova ny fandefasana azy raha vao natolotra ny mpitatitra izany. Raha mila manova fampahalalana momba ny kaonty ianao (adiresy fandefasana / faktiora, fampahalalana momba ny fandoavam-bola, sns.) Azonao atao ny mangataka fanafoanana ny kaomandinao amin'ny alàlan'ny fifandraisanao aminay avy hatrany ao amin'ny info@popular.jewelry. Raha efa nofoanana tsara ny baikonao, dia mety handefa baiko vaovao ianao.
Ny politikanay dia maharitra 15 andro aorian'ny datin'ny fandefasana. Raha 15 andro no lasa hatramin'ny nandefasanay ny fonosanao, tsy afaka manome vola na fifanakalozana izahay.
Ireo sombin-tsipika manokana toy ny nameplates, peratra anarana, ary nify sns dia tsy averina ary tsy ho ampiasaina amin'ny fampiasana crédit fivarotana. Ny fanaovana samirery sy ny fanovana (izany. Ny soratra amin'ny fehin-tanana; fehin-drindrina vita amin'ny peratra) amin'ny sombin-javatra iray dia tsy hahomby ny politika miverina. Izahay dia hilaza aminao alohan'ny fotoana hividianana raha toa ka voasokajy ny zavatra iray.
Ny entana naverina dia iharan'ny frais restocking 15% izay hesorina amin'ny famerenam-bola. Ny sandan'ny fandefasana dia tsy azo averina.
Mba hahafahanao miverina dia tsy maintsy ampiasaina ny zavatrao ary amin'ny fepetra mitovy amin'ny nandraisanao azy. Tsy maintsy ampidirina koa ny fonosana tany am-boalohany.
Refunds (raha azo ampiharina)
Raha vantany vao voaray sy voamarina ny fiverenanao dia handefa mailaka izahay hampandre anao fa nahazo ny entana izahay. Hampahafantatra anao ihany koa izahay momba ny fankatoavana na ny fandavana ny fandoavam-bola.
Raha nankatoavina ny fiverenanao dia hozahana ny fandoavam-bola ary hapetraka eo noho eo ny carte de crédit anao (na fomba hafa fandoavam-bola hafa) ao anatin'ny andro vitsivitsy.
Fandaniana lava na tsy hita (raha azo ampiharina)
Raha mbola tsy nahazo valisoa ianao ao anatin'ny herinandro iray aorian'ny fanamarihana ny vola, miangavy anao hifandraisa amin'ny banky sy ny carte de crédit / PayPal. Mety haharitra ny fotoana ny fanarenana ny famerenam-bola. mety ho fotoana kelikely alohan'ny hamoahana ny famerenanao.
Raha efa nanaraka an'io fomba io ianao ary mbola tsy nampahafantarina na nahazo ny valin-karamanao, azafady mba hifandraisa aminay amin'ny popularjewelrycorp@gmail.com.
Sale items (raha azo ampiharina)
Ireo entana novidina tamin'ny vidin'ny fivarotana mahazatra ihany no azo averina. Tsy azo averina ny entana amidy.
fifanakalozana (raha azo ampiharina)
Tsy manolo ny entana isika raha tsy simba na simba. Raha mila fanoloana marina ianao dia andefaso mailaka ao amin'ny info@popular.jewelry ary alefaso ny entanao 255B Lakandrano lakandrano New York, New York Etazonia 10013. Ny fifanakalozana dia tsy miankina amin'ny saran'ny restocking 10%.
Raha voamarina ho fanomezana ilay entana raha novidy sy nalefa mivantana taminao, dia hahazo crédit feno ianao amin'ny sandan'ny fiverenanao. Raha vao voaray ilay entana naverina, dia alefa mailaka aminao ny taratasy fanamarinana fanomezana.
Raha tsy voamarina ho fanomezana amin'ny fotoana fividianana ilay entana, na raha ny fahazoan-dàlana nomena azy ho zaraina aminao ny gifter dia handefa valisoa ho an'ny gifter izy ary izy no tompon'andraikitra amin'ny fitantanana azy. ny taratasy fanamarinana / fanomezana.
Miverina ny fandefasana
Mba hiverenanao ny vokatrao, azafady mifandraisa aminay amin'ny info@popular.jewelry misy ny laharana baiko sy "RETURN" ao amin'io lohahevitra io. Na dia tsy ilaina aza dia mety hampidirinao koa ny antony fiverenana (miezaka izahay hanatsara ny serivisy ary ny fandraisana hevitra dia raisinay!)
Raha efa nekena ny fiverenana dia alefa ny sambo ny fiverenana amin'ity adiresy manaraka ity:
255 Làlana lakandrano lakana B
New York New York Etazonia 10013.
Ianao no tompon'andraikitra amin'ny fandefasana ny vidin'ny kitapom-bola. Ny vidin'ny fandefasana amin'ny fotoana fividianana dia tsy averina. Ny vidin'ny fandefasana ny famerenana dia esorina amin'ny fiverenanao.
Ny fotoana ilàna ny kitapom-bola / navaozana miovaova arakaraka ny toerana misy anao. Homenay anao ny mombamomba ny fanaraha-maso amin'ny fotoana andefasana (matetika amin'ny alàlan'ny mailaka) raha mety.
Raha mandefa entana mitentina $ 75 mahery ianao, dia andramo ny mampiasa serivisy fandefasana azo zahana sy mividy fiantohana ho an'ny fonosanao. Tsy afaka manome toky izahay fa handray ny fiverenanao.